WOWOW 48 ImiSebenzi yokuSebenzisa iMvula ePhindwe kabini ngeNkqubo yokuMnyama okuphathwa ngesandla
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iintloko zeshawari eziphathwayo / WOWOW 48 ImiSebenzi yokuSebenzisa iMvula ePhindwe kabini ngeNkqubo yokuMnyama okuphathwa ngesandla
Uyilo olwahlukileyo lweendlela ezi-3 zokuDibanisa amanzi Iindlela ezi-3 zokutshintsha kwamanzi kunye ne-anti-swivel lock nut yenza kube lula ukutshintsha ukusuka kwintloko yeshawari uye kwishawari ephathekayo okanye ukusebenzisa iintloko zeshawari zombini ngaxeshanye. Ikwabonisa isibiyeli esakhelweyo esingama-360 esine-swivel-adjustable bracket esetyenziselwa ukusetyenziswa kunye nokugcinwa kwentloko.
Shower nganye ine-7-Setting Iintloko ezi-Shower ezi-4.5 intshi Combo, ibandakanya intloko yeshawari enesandla kunye nentloko yeshawa. Intloko nganye yeshawari yoxinzelelo oluphezulu ineesetingi ezi-7, iMvula, ukuPhulula umzimba, iSPA Massage, Ukutshiza amandla, iMvula + iSPA Massage, Imvula + yokuPhulula umzimba kunye nokuGcina amanzi. Unokukhetha ukusuka kuma-48 apheleleyo kunye nokudityaniswa kweepateni zokuhamba kwamanzi.
Kulula ukucoceka kunye neAnti-block block -Imilomo yokutshiza igubungela indawo epheleleyo yentloko yeshawa, ishawa nganye ine-58 efanelekileyo yokucoceka ngemilomo yerabha eguquguqukayo kunye nemilomo ye-ABS eyi-14, ezi jets zokucoca i-anti-clog rub-clean zokucoca ngokulula kunye nokuthintela ukwakhiwa kwekalika.
Izinto zeNkulumbuso - Ishawari emnyama ye-ABS yeshawari, isibiyeli kunye ne-59, umbhobho weshawa we-PVC, ukumelana nobushushu obuphezulu, indawo yeprimiyamu kunye nokunganyangeki. Amantongomane ombhobho oqinileyo obhedu onxibelelwano oluthembekileyo oluvuzayo.
Ukufakwa lula -Akukho sidingo sokufowunela umntu owenza imibhobho ngemibhobho yamanzi, zintathu kuphela izinto ezidityanisiweyo kwimizuzu ngokulandela nje inyathelo ngenyathelo. Ukusebenza nayo yonke imigangatho yemigca ye-G1 / 2 esemgangathweni. Phawula: Kuqhelekile ukuva ilizwi xa uligungqisa njengoko kukho impeller kwintloko yeshawari enceda ukuvelisa amanzi okuphulula ngcono.
SKU: H5011B iindidi: Iintloko zeshawari eziphathwayo, Shower Imibhobho
9.29 x 9.02 x 3.98 intshi
Ukuhlamba ngesandla, Fixed Shower, 3-Way Diverter, Spare ngerabha washers, Teflon Tape, Shower Hose, Isikhokelo soFakelo
Intsha Entsha. Isiqinisekiso sonyaka esi-1
WOWOW Intloko yeshawari enesandla esiphathwayo, i-oyile ye-5 yokuSeta ...
Inkqubo yokuhlamba i-Thermostatic ye-Chrome enemvula ...